Per Brinkemo oo buug ka qoray Soomaalida Sweden | Somaliska
Per Brinkemo oo buug ka qoray Soomaalida Sweden
Ninka lagu magacaabo Per Brinkemo oo ah nin mudo ku soo dhex jiray Soomaalida Sweden ayaa soo saaray buug cusub oo loogu magacday daray “Mellan Klan Och Stat – Somalier i Sverige” kaasoo lagu turjumi karo “U dhexeeya Qabiil & Qaran – Soomaalida Sweden”. Ujeedada buuga ayuu Brinkemo ku sheegay in ay tahay in Swedishka la fahansiiyo dhaqanka iyo dabeecadaha Soomaalida.
Buuga cusub ayaa durbadiiba dhaliyay dood kulul oo ka dhexdhalatay Soomaalida iyo Swedishka iyadoo qaar ka mid ah Soomaalida ay buuga ku tilmaameen mid cunsuri ah oo muujinaya xumaanta Soomaalida halka qaar kale ay u arkeen in uu yahay buug muhiim ah oo loo baahnaa.
Brinkemo ayaa qabiilka saldhig uga dhigay buugiisa isagoo si dheer u sharaxay qabiilada iyo dhaqamada Soomaalida ee la xiriira qabiilka iyo muhiimada uu u leeyahay bulshada Soomaalida. Waxa uu sheegay in qabiilku uu yahay dugsiga Soomaalida iyo dowladnimadooda. Isagoo intaas ku daray in marka ay Soomaalidu yimaadaan wadanka Sweden oo ah wadan dowladnimo ku jiray boqolaal sano ay dhacayso isfahmi waa.
Inkastoo Brinkemo uu yahay nin aan xushmeyo isla markaana si fiican u dhexgalay Soomaalida, ayaan shaqsi ahaantayda waxaan buuga u arkay in uu yahay mid muhiimad aan loo baahnayn siinaya qabiilka. Isla markaana Soomaalida ku soo jeedinaya indhaha Swedishka oo laga yaabo in ay si qaldan wax u akhristaan. Soomaalidu waa shaqsiyaad in dhamaanteen hal buug lagu sharaxo waxaan u arkaa qalad.
Brinkemo waxa uu aad ugu dhexjiray Soomaalida Waqooyiga maadaama uu ka shaqayn jiray jaaliyada “Somaliland förening” ee Malmö. Taasoo ah halka uu ka bartay sawirka qabiilka. Sida qabiiilka ay u arkaan Soomaalida Muqdisho iyo kuwa Hargeysa ayaa la dhihi karaa farqi ayaa u dhaxeeya, inkastoo reer Muqdisho ay qabiilka isku laayeen ayay hadana ceeb ka tahay Muqdisho in qabiilka dadka la waydiiyo ama la sheegto.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan aaminsanahay in sawirka uu buugaan ka bixin doono Soomaalida uu saldhig u noqon doono sida ay Swedishku noo arkaan. Haddii aanan ku qanacsanayn buuga ayay muhiim tahay in Soomaalidu ay soo bandhigaan dhinacooda sheekada.
Jaamac miicaad says:
Inkasta oo aanan buugaas wali akhrin, hadna inta aad hada nooga sheegtay waxaan aamin sanahay in ay soomaalida sax ku tahay oo wax soomaalida ku khalad ah aysan ku jirin. Mudo gaaraysa 54 sano oo soomaalidu xor-nimo dowladeed haysatay, soomaalidu qabiilka iyo qaranka waxay u daacad santahay qabiilka oo taasi wax laga doodi karo maahan, hadaad taas shaki ka qabto bal eeg qaabka ay ku dhisantahay dowladda Somalia iyo baarlamaankuba, waxaad kaloo eegtaa qola kasta oo dawladda dhaliil u haysa waxa dhaliisheedu ku salaysantahay. Doodaada ah soomaalida hal book laguma soo koobi karo waa run oo way jiraan dad aan tiro yarayn oo aan qabiilka ku qaraaban laakiin mar walba waxaa laga hadlaa meessha dadku u badanyihiin iyo waxa saamaynta badan leh taasna hadii aanaan runta diidayn waa qabiil si-xun u isticmaalka.
Fikrad lala dhacay 19 2
June 14, 2014 at 14:18
Somalidu ma hargaysa iyo Xamarba kkkkkkkk Aaway dadki ugu dhaqanka adkaa Somaali oo afka iyo dhaqanka somaali qoray oo ahaa kuwii Ladagalamay gumaystihii waxa cajiib ah inaa Somali hargaysa iyo Xamar ku kobtaan lakin taas waxay la mid tahay Sagaradi bada ku kaadisay i dhahday wan wasaqaynaya kkkkkkk
Dood kulul. Ka Jawaab? 8 11
Qabiilka Allah ayaa quraankiisa kusheegay in leysku aqoonsado darteed
inkastoo loo sarifay dhinac kale iyo qabweynin qaabdaro.com.
Nin swedesh ah oon meel iskala shaqeeyno Ayaan warsadhay laga bilaabo hooyo,,aabe ilaa 10 farac inta qofoow kayaqaan yacni ahalkiisa. Mugaas aw iigu jawaabay ineysan dhameeyn 30 qofood kurtigood meeshaas waxaakacad muga inawsan macno ugu fadhin qaraabada iyo qabiil raadsiga. Walee marka uma eko inaw guursado ama aw sambo kula noolaado aayadiis ama edadiis geed madaw amaba maahin aabawgiis gabar aw furay iwm. Marka waxeey ilatahay qabiilka inlesku aqoonsado misna lesku xariirsho qofkasto mahoow kuujoogo boos ahaana aad ogaatid ee aadan abkoowgaa dhihin haye adeer ama eboow iwm. sikastaba ha ahaatee ra,yi ayaah qabiilka inana laga tagin waa kutalihaa wixi hee isdilid iyo qacqac kale ah waa noo meesheeda 25 sano aan kusoo baranay waxeey yihiin waa naqaan asc
June 14, 2014 at 15:43
Adeer looma dhama Buugaan waxna kama jiraan maxaa yeeley miyaa Puntland lagala tashtey qorida buugaa Adeer ninkan la dhaho Per Brinkemo waxaan u sheegeenaa arimaha Somaliya anaga ayaa ah cida laga tashan karo buugaasna waxa ku qoran marna nama quseeyaan
Qoraagu hadii soomaalidu qabiil in ay ku dhaqmaan asaas uga dhigay buugiisu la yaab malahan oo waa xaqiiqo midaas balse koofurta soomaaliya in aad qabiil kaada lasoo boodo ama qof ugu magac darto oo hadana ugu yeerto waa ceeb. Waana ku waafaqsanahay fikir ahaan qoraaga maqaalka qoray.
June 14, 2014 at 19:21
Qabiil iyo qurunkiisa waa from waqooy somali badan aya isku raacday in reer waqooyga ee ahaan jireen dad la heeb sooco tusaale maanta waxaad eegtaa mid reer waqooy meel kaligiis joogo hadee rwer koonfur la joogaan wuu soo dhex galaa oo kaama dheeraanaayo waxaad isleedahay waa dad fiican markaasaa mid kaloo reer waqooy xaafada imaanaa xitaa isku magaal maahan ismana yaqaanaan markaasaa isku horeeso kabacdi waad waayneysaa oo maalintaasaa kuugu danbeeso kkkk dad kaas waa qabiil aabihiis halka reer koonfuri dadka xigtada eh aananbadanaa saaxiibin ee kala fogaadaan kkkkkk hadaan usoo noqdo buuga inuu qaldan yahay waxaa kuu cadeeneesa isaaqu waa dir marka halkaana waxaa ka muuqata in isaaqu yahay beel la siman beelaha hawiye iyo dir raxaweyn daarood marka waa qalad muuqda
June 14, 2014 at 19:25
Waxaan maqli jiray reerka isaaqa la leeyahay salaada duhur waa bin ciraaq salaada casarna waa bin sacuud ama sucidiyaan salaada maqribna waa bin yemen salaada cishahana waxee noqdaan irir ama dir kkkkkkkk marka layaab maleh in ninka buuga qoray loo baray in isaaqu yahay qabiil goonidiisa u taagan oo la siman qawmiyadahaa kale kkkkk
Buuga magaciis jimale
Jimacaale adeer Adiga qolamaa tahey waan kugu wareernayee Ma reeha Xamar iyo agagaarkiisa sheegta ayaad tahey ?
Gabar soomaliyeed. says:
June 15, 2014 at 01:54
Asc: Walaal qofka magaca “Puntland” watoow edebyeelo oo waxaadkuhadleeysana ka warhay!!!!
Jimcaale ciduu yahay waxba kaamagalin waa will Soomaliyeede.
Teedakale Magaca “Puntlandn” Iska daa waabeentaa Ma,aadtihid reer puntland?
Waayo Waadad intaas kacaqlibadan, oo waxaas aadkuhadleeyso kamaba suurtoowdo?
Hadaad rabto inaad CAYDO;ama UGAFTO, walaal soobandhig soo soocadeyso.
Laakiin sidaan kuu soconweyday oo waa lagugu fahmay saaxiib.
Hadan kahadlo buugaan iyo Arinkiisa wali maanan aqrin laakiin faaladiisa umabogin. waayo waxaakamuuqda negativt badan oo soomalida kusaabsan iyo buunbuuninqabiil.
horta kan webka wax ku soo qoraa isaga ayaa qabaliya ta labaad dadka qabyaalada sida xun ee jahligaa u isticmaalaa waa reer muqdisho lakiin butland iyo somalilan waa la isticmaalaa balse si reer magaalnimo ah ayaa loogu dhaqmaa
bal eeg dadka 24 sano isku cunaya qabiil ee caruurtoodii baabiiyay ee 10 jir dhiigya cab miidhan ku noqdeen dadka muqdisho degan 10 todoba ayaa dhagar galay si uu galayba
Putlander sxb ha isku sifeyn ninka siduu noo calaameeyay ee meesha aan uga hadalno soomaali ahaan iyo dowladnimo hana u hadlin qabiil puntland waa nabad lkn waxa meesha ka maqan oo reer puntland sverige keenay waa dowlad la,aan marka aan wada raadino dowladnimo qab iyo qabiil meel kuma geynaayo boooooooooooooooooowe ee ka daay tan kale arimaha soomaaliya puntland yeysan kula noqon mid go,aamin karta oo ey tahay in wax walbo lagala tashado ee runta waa in soomaali ey u baahan tahay dowlad dhexe oo shaqeysa puntland na waxey u baahan tahay soomaali weyn ee soomaali weyn uma baahno puntland qabweyn
June 15, 2014 at 12:11
buugaan looma dhama hadeynu nahay dowlada puntland waanu ka fuussaneynaa.
Waana in kulan arintaa lagu falaqeynayo lagu qabtaa garoowe.
buugaan looma dhama hadeynu nahay dowlada puntland waanu ka fiirsaneynaa.
ASC, dhamaantiina, marka hore aan wada aqrino buuga ka dib ayaan talo heli karnaa inkastoo inta somaliska.com uu inoo bidhaanshay aysan nagu filneen, lkn waxaan iska indha tiri karin waxa la sheegayo 90% ay yihiin wax sax ah …. in Soomaalida ay isku tixgaliyaan isku afgartaan QABIILKA waa mid aan iska indha tiri karin meel walba aan joogno waa wax aan wada ognahay yaanan is indha tirin walaalayaal. MAHADSANIDIIN
Buugan somalida wiji xun ayuu kasiinayaa bulshaweynta sweden mideeda waxa uu kuqoray waxyaabo uusan waxba ka,ogeen keliye ushegen dad aan sifiican u aqoon dhaqanka somaliyeed iyo qabiilada aniga waxaan leeyahy per somali wax kama kaseesidee baabkeeda kabax.